မိဖုရားအဖြစ်ဝတ်စားဆင်ယင်: Armani ရဲ့သင့်ရဲ့ဗီရိုကြီး Elizabeth II ကို update လုပ်ဖို့လိုလား
ဒါဟာအီတလီဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ Giorgio Armani, Illustrious နှင့်ကမ္ဘာတစ်လျှောက်လုံးအသိအမှတ်ပြုအိပ်မက်မက်ဖို့တစ်ခုခု, ပုံပေါ်မလဲ ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကနာမည်ကြီးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာအင်္ဂလန်၏ဘုရင်မကြီးဝတ်ဆင်ဖို့အိပ်မက်မက်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါဒီဇိုင်နာငါ့ဦးခေါင်းသည်ခုနှစ်ပြီးသားတော်ဝင်ဗီရိုဆုံးမခြင်းဘို့အိုင်ဒီယာအများကြီးရရှိထားသူကပြောသည်။
သို့သော်တော်ဝင်မိသားစုကိုမအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များဒီဇိုင်နာ Armani ရဲ့မျက်မှောက်အောက်မှာလာ၏။ ဥပမာအားဖြင့်, ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီးရဲ့မြေးရဲ့ဇနီး Duchess ကက်သရင်း, အဒီဇိုင်နာသည်နှင့်အညီ, အသီးသီးပြီးပြည့်စုံသောအရသာနှင့်တစ်ဦးဗီရိုရှိပါတယ်။ သငျသညျကျော်ကြားဒီဇိုင်နာများအားဖြင့်လိုခငျြအဖြစ်ဒါပေမယ့် 90 နှစ်အရွယ်အယ်လီဇဘတ်နှင့်အတူကောင်းစွာစိတ်အားထက်သန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Armani ရဲ့တစ်ဦးစတိုင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်သရဖူဆောင်းအဲလစ်ဇဘက် II ကိုချီးမွမ်းခြင်း, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာထူထောင်ပျော့၏ခေတ်ပြိုင်စတိုင်နဲ့ကြော့ရှင်းလူငယ်ဦးတည်ချက်အချို့ကို element တွေကိုတစ်နည်းနည်းထက်၎င်း၏ပုံရိပ်ကိုပိုပြီးလုပ်လိုသည်။
လေပြင်းတိုက်ခြင်းဒီဇိုင်နာအားလုံးမဟုတ်ပါတန်ဖိုးထား။ ထို့ကြောင့်ဧလိရှဗက် II ကိုယနေ့အရှိဆုံးကြော့အမျိုးသမီးတစ်ဦးကအသိအမှတ်ပြုခဲ့သူထုတ်ဝေ Vanity Fair ၏ကိုယ်စားလှယ်များ, ရည်ရွယ်ချက်များ Armani ၏အတည်ပြုခြင်းနှင့်ကရွေးချယ်ထားသည့်ပုံပေါ်အစဉ်အဆက်လျော့ကျဘဲအမြဲအဝတ်ရွေးချယ်ရာတွင်အတွက်တင်းကျပ်ခဲ့သောကြောင့် 90 နှစ်အရွယ်ဘုရင်မကြီးတိကျစွာအရှိဆုံးစတိုင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြောင်းရှင်းပြဘူး။
McDonalds 20 ခန့်စပ်စုနဲ့ဒီကဗျာဖြစ်ရပ်မှန်များ
ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ကိုချစ်ရာသခင်သည်ခွေး Willow ၏အသေခံခြင်းအားဖြင့်ဝမ်းနည်းပက်လက်
"ကျနော်တို့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာဘုရင်မကြီးသည်သူ၏စတိုင်မပြောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မာနထောင်လွှားကြသည်။ ဒါဟာအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောကြောင်းနှင့်အစဉ်အမြဲဒီမသေချာမရေရာကမ်ဘာပျေါတှငျတည်ငြိမ်မှု၏သင်္ကေတနေဆဲဖြစ်သည်။ "
Selena Gomez အဆိုတော် Justin Bieber နှင့်အတူ ပြန်. ထားပါတယ်
Mel Gibson လူငယ်တစ်ဦးကိုယ်ဝန်ရှိရည်းစားကိုလက်ထပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ
မာကု Salling ကလေးညစ်ညမ်း၏အပိုင်ထောင်၌ထိုင်
မေတ္တာအဆုံး: မာတင် Freeman ကများနှင့်မန်ဒါ Abbington Part
သာဂျနီဖာ Brad Pitt စိတ်ကျရောဂါထဲကဆွဲထုတ်နိုင်ပါ!
ထအဖြူ - Password ကို: "ဂရမ်မီ" ညျြးအခမ်းအနားမှလာကြလိမ့်မည်ဧည့်သည်များ
Nikki ရိဒ်နှင့်မှ Ian Somerhalder မိဘများဖြစ်လာကြပါပြီ
ဂျက်စီကာ Alba နှင့်ငွေ Warren
နီကိုးလ် Kidman နဲ့ Keith မြို့ပြမွေးဖွားတဲ့နေ့ကအတူဂီတပညာရှင်ကျင်းပ
သတို့သား၏အသေခံခြင်း Michelle Dockery များအတွက်အမှန်တကယ်အဖြစ်ဆိုးခဲ့
သင်ျဂွိုဟျစောစော: "X-Files" ၏ပရိသတ်များစီးရီးအဆုံးသတ်ထား
အနာဂတ်မိခင်များအဘို့ 38 ကိုမူလကိတ်မုန့်
လျှော့ချဟေမိုဂလိုဘင် - လက္ခဏာများ
အဘယ်ကြောင့် Pickled ၏အိပ်မက်?
အဆိုပါ PMS ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Zakopane - နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး